Izifufula: kanjani ukwandisa isivinini thwebula
Cishe wonke msebenzisi we-Inthanethi okungenani kanye, kodwa kwadingeka ukuba ukulandwa kusukela yinethiwekhi yomhlaba jikelele noma iluphi ulwazi, noma kungaba umculo, ama-movie, amaphepha, noma amabhuku alalelwayo. Ezinye zalezi amafayela abe esibalulekile, kungani akusiyo njalo kungenzeka ukulanda nabo ngendlela evamile. Ukuxhumeka lehla, futhi nalo, futhi ukulayisha. Ngaphezu kwalokho, inani elikhulu Imininingwane idluliswe isikhathi eside. Akubona bonke abasebenzisi ngokwanele isikhathi khulula noma okungenani ithuba ukushiya ikhompyutha yakho ku, yithi, ku ubusuku kuze ifayela spool.
Kulesi ukukhanya, umfula kwakuyisambulo. Ukufika kwabo waletha exchange Imininingwane ezingeni elisha. Inethiwekhi lokuqala enjalo yahlonywa uMklami American Bram Cohen akuyona iminyaka engaphezu kweyishumi edlule, kodwa ngokushesha kwakuqala ukwanda. Yikuphi akumangazi uma ucabangela ke Izinzuzo ebaluleke.
Kusukela ngo-2001 kwaba khona abasebenzisa i-Internet emangalisayo ukulanda amafayela indlela entsha, fast and elula. kakhulu Ingqikithi yalo imibono uhlelo American kwaba ukuqinisekisa ukuthi abantu bakhululekile ukuba sabelane ulwazi ezithakazelisayo. Ngaphezu kwalokho, ifayela elandiwe sandile irekhodi isikhathi. Futhi, ungayeka emesaba Ukukhipha: Manje ngokuzayo uhlelo iyaqala kusukela iphuzu lapho ugcine khona.
Okwamanje nezifufula cishe inkonzo ethandwa kakhulu yokwanda ukwaziswa okukuyi-Internet. Kodwa, njengoba nanoma iyiphi enye uhlelo, umsebenzi wabo ngezinye izikhathi inkinga. Phakathi kokunye, ikakhulukazi phakathi kwabasebenzisi be uhlala umbuzo kanjani ukwandisa ijubane kulanda sesifufula. Ngezansi yezindlela eziphumelela kakhulu yokuxazulula le nkinga.
Indlela ukukhetha ngakwesokunene?
Okokuqala, kukhona izizathu eziningana izinga lokuwa. Futhi ezinye akuncikile umsebenzisi. Lezi zihlanganisa i-ratio ongalingani seeders nontanga. Ngamagama alula, usabalalisa nokulanda abasebenzisi amasevisi. Ngokwesibonelo, ukunakekelwa omunye LED nge izinga ukusatshalaliswa igcwele ukuwa elibukhali konke izilandi.
isivinini nayo iyancishiswa uma sesifufula ukuxhuma inqwaba ontanga. Ngenxa ukuthutheleka traffic izokwabiwa inombolo enkulu amakhasimende, okwenza ijubane ngamunye asithathwa kuhlanganisa ukwehla. Ngakho-ke, iyiphi self-ukuhlonipha isisetshenziswa sesifufula esandleni ngasinye siyadingeka ukwethula ulwazi sidah nezemikhosi. Akufanele neze sidebeselele ke. Okuhle kunakho konke, ebuhlotsheni phakathi kwabo kwakufanele okungenani eyodwa kwenye.
Enye indlela ukuthi ukwandisa ijubane okulandwayo, libhekisela hlelo kakhulu sesifufula ifakiwe kukhompyutha yakho. Cishe wonke isici imikhawulo ekhona thwebula isivinini kanye nokusabalalisa. Ngengozi noma lezi zimiso lingasethwa ngaleso esiphezulu luhlaza bese Yiqiniso, ijubane izomashela ngokucijile.
Futhi, abanye abantu ngephutha sikholelwe ukuthi ngokukhawulela ijubane layisha, ngandlela-thile ukwandisa ifayela thwebula ngesivinini. Kodwa lokhu akulona icala. Ngendlela ecashile, ukugwenywa kuthinta ngisho ezimbi. Phela, abantu ukulanda ifayela efanayo abakwazi ukukwenza ngokushesha bese ubuyele kwi uhlangothi, abe Sidera. Ungakhohlwa ukuthi main ukushayela isimiso lwesifufula: download ngokwayo - ngokusiza abanye.
Kukhona esinye isici ukuthi kudingeka ucabangele, uma uyazibuza kanjani ukwandisa isivinini thwebula. ngesikhathi esifanayo futhi kunciphisa ijubane uma ulanda amafayela amaningi. Muva nje, ngenxa yokuthi inani traffic atholakalayo Inthanethi kwasakazwa ngokulinganayo phakathi kwawo wonke okulandwayo (uma ubeka imingcele ngoba abanye babo). Ngenxa yalokhu, ijubane uxhumano ngabanye nakanjani uyowa. Kulokhu, ikhambi elingcono kakhulu ukungafaki okulandwayo eziningi kanyekanye, bese ukhetha owodwa noma emibili ebaluleke kakhulu. Abanye kungenziwa okwesikhashana.
Indlela ukwandisa thwebula ngesivinini esebenzisa izinhlelo ezengeziwe?
izici ezibalulekile ezithinta okwehlisa yokulandwa izandla, kungasiko. Ngempela abalulekile kulezi inani uxhumano isigamu-evulekile (TCP). Iqiniso ukuthi ekuqaleni e yiluphi uhlelo lokusebenza ku-izivimbelo Windows-based eziphoqelelwe kulokhu. Hhayi ngaphezulu kuka-10 uxhumano isigamu-evulekile, kuyilapho amaklayenti sesifufula bayakwazi ukuxhuma okuningi. Ngenhlanhla kubasebenzisi, zadalwa izinhlelo ezikhethekile ukugwema kokuvinjelwa.
Umsebenzi wabo akuyona iyinkimbinkimbi, balinganise la mathuluzi impela kancane. Inhloso esemqoka, futhi ngokuvamile ematheni isimiso esinjalo ukushintsha ongakhetha uhlelo e-Windows. Ukususa komkhawulo ivumela sesifufula ukuqala umsebenzi omningi amandla, kungani thwebula ngesivinini kungandisa kakhulu. Kuye ijubane Internet, lokhu ipharamitha luyanda 60-100 lezi zakhi esikhundleni 10. Omunye batusa izinhlelo eziningana kungase kutholakale efana elula Isigamu uvule umkhawulo fix (patch), TCP / IP Patcher HWRMS noma ube ibanda ukusebenza kanye namakhono control TCP compounds -Z.
Kukhona izindlela zokuzivikela kanjani ukwandisa isivinini uxhumano, futhi ngaphandle asebenzise ngezidingo ezifana. Ngokwesibonelo, khubaza nezinye izinhlelo ezihlobene kwi-Inthanethi. Phela, i-traffic isakazwa kubo. Futhi ngisho ezincane kakhulu, njenge imeyli ejenti noma ICQ. It is ibuye Kunconywa ukukhubaza zizibuyekeze, lapho asikho isidingo ethize. Ngokuvamile, lokhu umsebenzi isebenza ngokukhululekile, ngenkathi iyavuleka ingxenye enkulu traffic.
Uhlelo BitTorrent kumelwe ukungezwa okuhlukile unqulo wesi arab. Kuyinto okufanayo zokuvikela. Njalo ukuqinisekisa ukuthi lezi zinsiza waquliswa uxhumano engenayo, kubathinta ezithinta isivinini. isinyathelo sokugcina kodwa kudingekile ukukhubaza brandmauzery-Windows, engesiyo iyahambisana umsebenzi amaklayenti sesifufula ngenye ukuyivimbela. Kuyinto ngempumelelo kakhulu ukuba babhekane nomsebenzi firewall ezinhle.
ISITHASISELO "periscope". Kuyini lokhu? Kungani ngidinga le app?
Kuyini ezithakazelisayo ukubuza Siri?
Yini ukuba agqoke avatar e yokuxhumana: amathiphu aphezulu
Indlela ukuthatha baton ku "Instagrame" futhi zithandwa?
Funny be ngabangane: lakhetsiwe bonke izikhathi
Indlela ukushintsha igama lesiteshi kwi "Youtube" bese wengeza incazelo?
An icala ezithakazelisayo ezimpilweni zabantu eziningana
Sea Commercial Port of Mariupol: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Yini ehlukanisa imali inzuzo? Uyini umehluko phakathi engenayo kusukela inzuzo izici zazo
U-Elbow Black: Yini okufanele uyenze ukuze uphinde ube mhle?
Ukuqala WWII, izimbangela zalo eziyisisekelo futhi izimo
Recipe "amantongomane ubisi nekharameli" - dessert kusukela ingane isencane
Amakhodi "Pankiller" Nginike ithuba, Daniel!
Kanjani ukugxilisa izihlahla zezithelo: amathiphu namasu
Izitini Ngokhuni ngezandla zakhe: izakhiwo kanye namathemba